FRP Tangi, Fiberglass Shell, GRP Tank - Jrain
Matangi & Zvipenga
Huru Kukura Munda Matangi
Fiberglass Dual Lamination Zvigadzirwa
Fiberglass Yakarongedzwa Zvigadzirwa
Fans & Dampers & Madhimoni
Mota & Boat Muviri
Izvo Zvimwe Zvigadzirwa
Fiberglass Kubata & Annex
Kubata & Kavha
Manera & Handrail
Filament Mhepo Mhepo Machina
Mhepo Machina eMatangi & Mapaipi
Mvura & Mhepo Kushambadzira
Thermal neNyukireya Simba
Chikafu & Waini
Ngarava Dzepeti uye Zvimedu
Dziviriro yekutamba Nzvimbo Yezvigadzirwa
TINOPA ZVINHU ZVINOGONESESA ZVINHU
Mabhangi uye Midziyo
Chaizvoizvo matangi & ngarava, kusanganisira izvo zvinowedzeredzwa, zvinogona kuvezwa mumhando chero chimiro kana chimiro, zvichiratidza kuchinjika kwazviri pamwe neFRP composites. Tichishandisa tekinoroji yedu yekudyara, isu tinokwanisa kugadzira matangi nemidziyo zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi zvakasiyana mudura redu tobva tazvifambisa zvakachengeteka kunzvimbo yako. Kune makuru matangi, isu tine yakasarudzika kugona kuvaka pane-saiti kune yako chaiyo yakatarwa, uye yakakura diame ...
Fiberglass macarter tank matangi anokwanisa kugadzirwa uye kugadzirwa pamhando dzakasiyana, saizi, mavara, makobvu, akafanirwa sevhisi mamiriro, insurance, conductors, nezvimwe. Maindasitiri mazhinji akasiyana anoshandisa matangi etsiva e-fiberglass kune ayo masisitimu: 1. Kusanganisa tangi, inogadzika, nezvimwe uye nezvimwe. yesimba renyukireya uye inosuka uye indasitiri yemigodhi. Jrain makede iyo rectangular inogadzirisa kune akawanda mapurojekiti. Kune mapurojekiti akasiyana, mainsini akasiyana anosarudzwa kuti asangane nemamiriro akasiyana ebasa. Kusiyana ...
Fiberglass scrubpent inonyanya kuzivikanwa nekuchengetedza mvura, kurapwa kwemvura, FGD system, kugadzirisa kwemakemikari uye kusvibiswa, iyo nzira yekuchenesa gasi, kutonga magasi emagetsi, kunyanya magasi akasvibiswa, kupisa tsvina uye maitiro ekugadzira magetsi. Nekuti: Mukuenzanisa nesimbi kana rubhabhu-yakarongedzwa simbi zvigadzirwa, Fiberglass yakasimbiswa plastiki (FRP) ine zvakawanda zvakanaka. FRP yakanyanyisa kurema-uremu, yakasimba kwazvo uye inogona kugadzirwa muhupamhi hwem diameter, iyo ine zvakananga imp ..
Fiberglass kujekesa uye inogadzikana yakareruka pane yechinyakare simbi zvinhu, uye inokubatsira iwe kuti uwane yakakodzera kwazvo kubatanidzwa uye kuunganidza ruzivo kunze kwezvakagadzirwa. Jrain inopa fiberglass rectangular matangi uye kujekesa, vagadziri, mvura yemvura, hood kana chivharo, kuunganidza nekushandisa (launder) yemvura, mvura ine tsvina, migodhi nezvimwe zvinoshandiswa mumaindasitiri. Zviso zvembambo zvezvikamu zvinotakura musango wakanangana negomba rakatsvedza. Munguva yekudzoka kufamba, iyo wedge-yakavezwa zvikamu zvechikamu ...
Fiberglass inovhara inoshandiswa zvakanyanya mumvura uye panjodzi yekurapa, chikafu chemakemikari uye peturu, chikafu, pharmacy, nezvimwe. Fiberglass inovhara yakasarudzika mumavara uye maumbirwo akadai sekutenderera, rectangular, arch, flat, imba yemhando, nezvimwe sezvaidiwa nemutengi. Fiberglass inovhara inogara yakagadzirirwa kusangana nekudziya kwakasiyana-siyana, iyo yekumusoro kupedzisa inoshamisa inodzivisa kune yakashatisa mamiriro ekunze, ichiita fiberglass chinhu chakanakira kuratidzwa nezvinhu, kusanganisira zuva, s ...
Fiberglass fittings inowanzogadzirwa neyekuisa ruoko-up process, ine yakakwirira resin yezvinhu. Mhando dzakasiyana dzinogona kuzikanwa nekushandisa zviumbwa. Mafuta akasiyana anokwanisa kusarudzirwa masvikiro akasiyana uye ebasa. Chero ipi neipi yakakosha masizi pamasayizi nemaumbirwo ichave iripo pane yekukumbira. Fiberglass fittings inonyanya kufarirwa sezvo ichiratidzwa ne: • Simba rakakura zvichienderana nehuremu • Magetsi uye nekufutisa nekuisa • Kuramba kudzora nemakemikari • Kuramba zvinopesvedzera ...
Jrain mapaneru akaumbwa mune chimwe chimedu uye anoratidza concave isiri-inotsvedza yekufamba pamusoro pevhu. Iyo inobatsira inobata mapaneru inobvumira inoshanda pakucheka -saiti kuderedza grating marara uye kutakura mitoro inotakura mabara mumativi ese maviri anotendera kushandiswa pasina kuenderera kumberi kutsigira. Yakagadziriswa fiberglass grating yakareruka zvakanyanya huremu kupfuura masimbi anodonhedza uye iyo yepamusoro sosi yemukati inopa yakanakisa kutu kurwisa uye inoda shoma shoma kugadzirisa. Chinhu chepamusoro chekuchengetedza chiri kuwana ...
Fiberglass mapaipi anosanganisira akachena fiberglass pombi, jecha mapaipi, insulation pombi, maviri maviri laminate pombi (ine PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, nezvimwewo) uye zvichingodaro Kumadziro kuvakwa kwefibhagirazi girazi system ine zvikamu zvitatu: 1．Liner: inosarudza kurwisa kwakanyanya pasvikiro. 2．Structural layer: inopa yakakwirira mehendi simba uye kuramba kune mitoro. 3．Yejasi repamusoro: inodzivirira iyo pombi system kubva kumamiriro ekunze, kemikari kupenya uye UV mwaranzi. Ivo vanozivikanwa kwazvo mumaindasitiri mazhinji kuve ...
Jrain FRP, iri paHengshui Guta reChina, inyanzvi inogadzira zvigadzirwa zvine composite. Isu takagadzira akasiyana-siyana fiberglass yakasimbiswa epurasitiki (FRP) kubvira 2008 uye tichiri kushanda mukuvandudza chigadzirwa, matanho nekusimudzirwa kwemusika. Kusvika parizvino tine 5000m2 mashopu, nemhepo yemuchina, vacuum midziyo uye mafuroni, etc. mazviri. Isu tinosimbiswa ne ISO9001 Quality Management System. Isu takarongedzerwa zvine chekuita nebhu uye nyanzvi FRP bvunzo zvekushandisa. Isu tinojairana neakawanda ane hukama epasi rese makodhi uye tobva togadzira zvigadzirwa zvinoenderana nazvo zvakadai se ASME, ASTM, BS EN.
NYAYA DZINOGARA ZVEKUJRAIN
Sinochem uye Shanghai Chemical Institute zvakabatana kumisikidza marabhoritari yakatsaurwa kumidziyo yemidziyo
Sinochem International uye Shanghai Research Institute of Chemical Viwanda Co, Ltd. (Shanghai Chemical Institute) zvakabatana yakamisa iyo "Sinochem - Shanghai Chemical Institute Composite Equipment yakabatanidzwa marabhoritari" muShanghai Zhangjiang Hi-Tech Park. Ichi chiimwe impan ...
VaChina vanoongorora vanogadzira superelastic yakaoma kabhoni nanofiber aerogels
Ichikurudzirwa nekuchinjika uye kuomarara kwespider silika webs, timu yekutsvagisa inotungamirwa naProf YU Shuhong kubva kuYunivhesiti yeSainzi uye Technology yeChina (USTC) yakagadzira nzira iri nyore uye yakajairika yekugadzira superelastic uye kupera simba kurwisa kabhoni aerogels ne nanofibrous ...
AOC Aliancys yakatanga kugadzira AOC Resins muChina
AOC Aliancys yakazivisa: AOC Aliancys (Nanjing, China) yakatanga kugadzira iyo AOC resins zvinoenderana nefomasi yakatumirwa kubva kumuzinda mukuru muUSA Idzi rese rezvigadzirwa zvitsva zvinosangana nezvinodiwa zvekugadzira, izvo zvinoreva kuti American mfululizo zvigadzirwa zveAOC Aliancys zvinowanikwa China zviri pamutemo ...
Nha. 1289, Yingbin South Street, Dunhu reJizhou, Hengshui, Hebei, China
Matipi - Zvigadzirwa zvinopisa - Sitemap - AMP Mobile
FRP Winding Machine, GRP Winding Machine, Kusvibiswa Kubata, Huru, Molded Fiberglass, Fiberglass Winding Machine,